Incoko igqwesile phakathi kobuntu, isalathiso sengqondo, nozuko lwenkcubeko yabantu; kodwa imvelaphi yayo yonke intetho iseBreath. Ukusuka phi indawo eyiPhula apho iya khona inokufundwa ngokulandela icebiso le-Delphic Oracle: "Zazi lomntu."
Vol. 1 JULAYI, 1905. 10
AMALUNGU oosapho loluntu aphefumla ukususela kumzuzu wokungena kulomhlaba wenyama kude kube lixesha lokuhamba kwabo, kodwa hayi de kwaba ikota yokugqibela yenkulungwane yokugqibela apho isebe lasentshona losapho linike ingqalelo enkulu ngokubaluleka kokuphefumla, kwaye kwinkqubo yokuphefumla. Ukuthathelwa ingqalelo kwisifundo, bamkele iindlela ezicetyiswe ngo "titshala" kwaye abaninzi baye baphola. Oonjingalwazi bezesayensi yokuphefumla bavele phakathi kwethu, abathi, siqwalasele, bafundise abangafundanga ukuba bafumane njani kwaye bagcina njani ubutsha obunokungafi, bavuke kwi-opulence, bafumane amandla kuwo onke amadoda, balawule kwaye balathise amandla endalo. indlela yokufumana ubomi obungunaphakade.
Sinoluvo lokuba imithambo yokuphefumla iya kuba luncedo kuphela ukuba ithathwe phantsi kwemiyalelo yalowo unolwazi lokwenyani kwaye emva kwengqondo yomfundi sele eqeqeshelwe kwaye elungiselelwe bona ngokufunda intanda-bulumko, kuba oko kuya kufundisa okwahlukileyo Amandla kunye neempawu zomfundi njengoko ekhula ngokuphefumla, kwaye zingamvumela ukuba ajamelane nengozi yokuphuhliswa kwengqondo. Ukuphefumla okude kwendalo kulungile, kodwa, ngenxa yokuziqhelanisa nokuphefumla, uninzi luye lwenza buthathaka isenzo sentliziyo kwaye bafumana ukuphazamiseka kwengqondo, izifo eziphuhlileyo, -ukusetyenziswa rhoqo rhoqo-bayadandatheka kwaye banomvandedwa, bafumana ukuzonwabisa okungathandekiyo kunye nokuzonwabisa okwandayo, Zingalungelelanisanga iingqondo zabo, kwaye bade bagqibela ngokuzibulala.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokuphefumla. Kukho i-Great Breath ethi ebbs kwaye ihambe ibaleka ngesingqisho esingaphelelanga; Ngayo iinkqubo zommandla wendalo ziphefumlelwa ngaphandle kokungabonakali kwendawo ebonakalayo. Ukusuka kwinkqubo nganye yelanga engenakubalwa iphefumla inkqubo yayo yehlabathi; kwaye kwakhona nganye yezi iphefumla ngaphandle kweendlela ezizezinye. Ezi fomu ziphinde zenziwa ngokutsha kukuqhambuka kweenkqubo zehlabathi, eziye zanyamalala kwinkqubo yazo yelanga, kwaye zonke ziyahamba zibuyela kwiBreath Great.
Ngomntu, ngubani ikopi yako konke oku, iintlobo ezininzi zokuphefumula ziyadlala. Into eyaziwa ngokuba ngumphefumlo awuphefumli konke konke, sisenzo sokuphefumla. Ukuhamba kokuphefumla kubangelwa kukuphefumla okuqhelekileyo emntwini nakwizilwanyana ngokufanayo, lo mphefumlo ubambe ubomi ngendlela. Ukuphefumla akuyona initrojeni kunye neoksijini, kodwa ezi zinto zisetyenziselwa ezinye zisetyenziswa ngumoya wokuphefumla ukuxhasa umzimba ngokutya okuthile. Lo mphefumlo udlala amalungu amaninzi kwaye usebenzela iinjongo ezininzi. Xa ingena emzimbeni xa kuzalwa yenza unxibelelwano phakathi kobomi belo mzimba kunye nolwandle lobomi apho umhlaba kunye nomzimba womntu uhamba khona. Nje ukuba uqhagamshelo lufunyenwe lo mphefumlo unxulumene nobomi bangoku ngaphandle nangaphakathi komzimba kumgaqo-nkqubo, obumba amandla omoya wobomi kuyilo nakwimo yomzimba. Ukusebenza esiswini kunye nesibindi okuphefumlayo kuvuselela kubo umdla, inkanuko, kunye neminqweno. Njengoko umoya udlala ngohambo lwehadi ye-aeoli, ngokufuthi umoya wengqondo udlala ngokusebenza kweethambo emzimbeni, uvuselela ingqondo kwaye uyikhokelele kwicala leengcinga ezihambisayo, nangona kungengokwakho-okanye kwindawo yokuhlala. ukuqhubeka nokwenza iminqweno ephakanyiswa ngumzimba.
Kodwa umoya wokuphefumla womntu ngumphefumlo wengqondo kwaye ukwimo eyahlukileyo. Sisisixhobo esisebenza ngaso ingqondo yangaphakathi emzimbeni kunye nomzimba. Lo ngumphefumlo odibanisa iingcinga, oko kukuthi, iingcinga eziveliswa ngengqondo. Lo mphefumlo wengqondo ngumzimba okanye umgaqo wengqondo wengqondo ngokwawo, osetyenziswa ngumphefumlo womntu ongapheliyo njengemoto ukwenza unxibelelwano nomzimba wenyama xa uzalwa. Xa lo mphefumlo ungene emzimbeni xa kuzalwa, useka ubudlelwane phakathi komzimba wenyama kunye nommiselo “nokuba ndinguye” umgaqo. Ngayo i-ego ingena ehlabathini, iphila kwihlabathi, iwushiye umhlaba, kwaye igqitha isuka emfezekweni iye kumzimba. I-ego isebenza kwaye isebenza kunye nomzimba ngalo moya. Isenzo esiqhubekayo kunye nokuphendula phakathi komzimba nengqondo kuqhutywa ngulo moya. Umoya wokuphefumla uphantsi komphefumlo wengqondo.
Kukho nomoya wokuphefumla, ofanele ukulawula ingqondo kunye nokomphefumlo. Umoya wokuphefumla ngumgaqo wokudala apho intando iya kusebenza khona, ilawule ingqondo, kwaye ihambise ubomi bomntu kunye neziphelo zobuThixo. Lo mphefumlo ukhokelwa yintando yokuqhubela phambili komzimba apho uvusa amaziko abafileyo, ucoce amalungu owenziwe ungacocekanga bubomi bokwenyama, uvuselela iinjongo, kwaye ubiza into yokwenyani yamandla kaThixo obuqu.
Ngaphantsi kwayo yonke le miphefumlo kwaye uyixhasa yiBreak enkulu.
Ngomsinga we-vortex okhawulezayo-ngokungathi kukuphefumla, okuphefumlayo wengqondo, ungena ngaphakathi kunye nokujikeleza umzimba ngokuzalwa ngerhasi yokuqala. Lo mnyango wokuphefumla sisiqalo sokwakhiwa kobu bodwa ngale ndlela yomntu yasemhlabeni. Kukho iziko elinye lokuphefumla ngaphakathi komzimba kunye nelinye iziko elingaphandle komzimba. Kubo bonke ubomi kukho i-ebb yokuhambahamba kunye nokuhamba phakathi kwala maziko mabini. Ngexesha lokuqhekezwa komzimba ngamnye kukho ukuphuma komphefumlo kwengqondo okuhambelanayo. Impilo yasemzimbeni, yokuziphatha, kunye neyokomoya, ixhomekeke kukuhamba okunobungozi komoya phakathi kwala maziko. Ukuba umntu unqwenela ukuphefumla nangayiphina enye intshukumo enganyanzelekanga, inkathalo mayithathwe ukuba uhlobo nenkqubo yokuphefumla okugqityiweyo kuya kuxhomekeka kumzimba womzimba, wokuziphatha kunye nokomelela ngokomoya, kumabhongo nakwiminqweno yakhe. Umphefumlo kukuphefumla ngaphakathi nangaphandle kwe-pendulum ekhupha ubomi bomzimba. Ukuhamba komphefumlo phakathi kwala maziko mabini kubambe ukulingana kobomi emzimbeni. Ukuba iphazanyiswa bubudenge okanye ngenjongo, impilo yomzimba nengqondo iya kukhubazeka kwaye isifo okanye ukufa kuya kubakho. Umphefumlo udla ngokuphuma kwiimpumlo zasekunene malunga neeyure ezimbini, emva koko uyatshintsha kwaye uqukuqela ngokulingene kuzo zombini iimpumlo ngokufanayo imizuzu embalwa, kwaye emva kwempumlo yasekhohlo kangangeeyure ezimbini. Emva koko ihamba ngokulinganayo kuzo zombini, kwaye emva koko iphinde iphumele ngaphandle kwempumlo elungileyo. Kubo bonke abaphilayo ngokugqibeleleyo oku kuyaqhubeka ukususela ekuzalweni ukuya ekufeni.
Omnye umsa wokuphefumla ongaziwayo ngokubanzi kukuba ungena kwaye ujikeleze umntu ngamaza obude obahlukeneyo, ogqitywa kukuphefumla kwendalo, nakwimpilo yakhe esemzimbeni, yokuziphatha, kunye nokukhula ngokomoya.
Ngoku ukuziqhelanisa nokuphefumla kutshintsha kukuzithandela kokutshintsha ukuhamba kwakho ukuya ngasekhohlo okanye ekunene ngasekhohlo, njengoko imeko inokuba njalo, ngaphambi kokuba utshintsho lwendalo luqale ngaphakathi, uthintele ngokuzithandela ukuhamba, kunye nokutshintsha kobude bamaza. Ngokunxulumene nento ethethwe ngumphefumlo kufuneka kucace ukuba unxibelelwano olufihlakeleyo lomntu nendalo linokuphazanyiswa ngokulula kwaye ubudlelwane bakhe buyekwe ngaphandle komqolo. Yiyo ke loo nto ingozi enkulu kwabo bangazi nto nabangxamisekileyo abathatha imithambo yokuphefumla ngaphandle kwesiqinisekiso sokuba belungile, nokuba benomfundisi ofanelekileyo.
Ukuhamba komphefumlo kusebenza kumandla amaninzi emzimbeni. Ukulondolozwa kobomi bezilwanyana kufuna ukuqhubeka nokufakwa kweoksijini kunye nokukhutshwa kwe-carbonic acid. Ngokugqobhoza umoya utsalwa kwimiphunga apho idibana khona negazi, ethatha ioksijini, ihlanjululwe, kwaye idluliselwe ngenkqubo ye-arterial kuwo onke amalungu omzimba, ekwakheni nasekwenzeni iiseli; ke ngendlela yamathambo igazi libuya libekwe iicarbonic acid kunye nenxalenye yeemveliso zenkunkuma kunye nezinto ezifanelekileyo, zonke ezikhutshelwa emiphungeni ngokuqhuma. Ke impilo yomzimba ixhomekeka kwi-oxygenation eyaneleyo yegazi. Ngaphezulu okanye phantsi kwe-oxygenation yegazi kubangela ukwakhiwa kweeseli ngokwangoku kwegazi ezineziphene kwindalo yazo, kwaye kuvumela izifo zanda ukuba ziphindaphindwe. Zonke izifo emzimbeni zibangelwa kukungaphezulu okanye phantsi kweoksijini yegazi. Igazi lifakwe ioksijini ngokuphefumla, kwaye ukuphefumla kuxhomekeke kumgangatho wokucinga, ukukhanya, umoya kunye nokutya. Iingcinga ezinyulu, ukukhanya okuninzi, umoya omsulwa, kunye nokutya okucocekileyo, uphefumlela ngokuchanekileyo kwaye ke ngoko i-oxygenation efanelekileyo, ke impilo esemzimbeni.
Imiphunga kunye nolusu ayisiyiyo kuphela imigudu umntu aphefumla ngayo. Ukuphefumla kuza kunye nokudlula kuwo onke amalungu emzimbeni; kodwa kuyaqondwa ukuba ukuphefumla ayisiyokomzimba, kodwa yeyokomphefumlo, yengqondo nangokomoya.
Ukuphefumla kukhuthaza isisu, isibindi, kunye namabala; inkanuko, inkanuko, kunye neminqweno. Ingena entliziyweni kwaye inika amandla kwiimvakalelo kunye neengcinga; ingena entlokweni kwaye iqale intshukumo yamalungu omphefumlo kwingqondo engaphakathi, ibazisa ngokunxulumene neendiza eziphezulu zokuba. Ke umoya ophefumla ingqondo uguqulwa ube yingqondo yomntu. Ingqondo kukuba "Ndinguye," kodwa "Ndinguye" sisiqalo sendlela ekhokelela kuLowo ungasebenziyo - Ukuqonda.